COVID-19 खोप सम्बन्धी जानकारी - संघ समुदाय देखभाल COVID-19 खोप सम्बन्धी जानकारी - संघ समुदाय देखभाल
COVID-१ forma मा सूचित गर्नुहोस् स्पेनिशमा
Moderna, Pfizer, वा Johnson & Johnson खोपहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, वा बूस्टर डोजका लागि उपलब्ध छन्, तपाईंको स्वास्थ्य आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ।
हामी बालबालिका (५ वर्ष+), किशोरकिशोरी, र वयस्क - यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्न भने पनि।
हामी युनियन रोगीहरू (६ महिना - ५ वर्ष) बालबालिकाहरूलाई खोप दिइरहेका छौं मात्र.
भ्याक्सिन अपोइन्टमेन्ट तय गर्नको लागि ७१७-२९९-६३७१ मा कल गर्नुहोस् वा कुनै एकमा हाम्रो भ्याक्सिन वाक-इन घण्टाको बारेमा सोध्नुहोस्। हाम्रो केन्द्रहरु. हालका बिरामीहरूले उनीहरूको माध्यमबाट पहिलो खोप अनलाइन तालिकामा राख्न अनुरोध गर्न सक्दछन् रोगी पोर्टल.
COVID-19 खोपको साइड इफेक्ट र सत्यता:
खोप लगाएपछि, तपाईलाई फ्लू जस्तो साइड इफेक्ट हुन सक्छ। यसको मतलब तपाई बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने होइन - यो तपाईको शरीरले सुरक्षा निर्माण गरिरहेको छ र भाइरससँग लड्न तयार छ भन्ने संकेत हो!
केही व्यक्तिहरूले उनीहरूको दोस्रो खुराक वा बूस्टर खुराक पछि बलियो साइड इफेक्टहरू महसुस गर्छन्। ओभर-द-काउन्टर दुखाइ राहत औषधिले यी साइड इफेक्टहरूमा मद्दत गर्न सक्छ। धेरैजसो मानिसहरू खुसी, स्वस्थ, र २४-४८ घण्टापछि सामान्य अवस्थामा महसुस गर्छन्!
खोपले तपाईंलाई र तपाईंका प्रियजनहरूलाई गम्भीर रोग, अस्पताल भर्ना वा मृत्युबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ।
खोपले तपाईंलाई COVID-19 दिने छैन वा तपाईंलाई COVID-19 को लागि सकारात्मक परीक्षण गराउने छैन।
खोपले तपाईंको DNA परिवर्तन गर्दैन, बाँझोपन वा गर्भपातसँग जोडिएको छैन, र खतरनाक सामग्रीहरू, भ्रूण कोषहरू, अण्डाहरू, वा संरक्षकहरू छैनन्।
पहिले नै COVID-19 भइसकेका मानिसहरूले अझै पनि खोप पाएर लाभान्वित हुनेछन् किनकि हामीले थप COVID-19 प्रकारहरू देख्छौं।
तपाईंको भ्याक्सिन पहिल्यै मिल्यो? आफ्नो परिवार, साथीहरू र छिमेकीहरूलाई भन्नुहोस् कि यो सुरक्षित छ र यसले काम गर्दछ! अझै पक्का छैन? खोपको बारेमा आफ्नो प्राथमिक हेरचाह प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् र यदि यो तपाईंको लागि सही छ भने।
COVID-19 खोपहरू नजिकबाट हेर्नुहोस्:
Moderna र फाइजर खोपहरू
Moderna र फाइजर खोप एक नयाँ प्रकारको खोप हो जसले मेसेन्जर आरएनए (mRNA) प्रयोग गर्दछ।
mRNA खोपको व्याख्या गरियो: mRNA एक ईमेल जस्तै हो जसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भाइरस जस्तो देखिन्छ, यसलाई मार्नको लागि निर्देशनहरू, र त्यसपछि हराउनेछ। Years० वर्ष पहिले, वैज्ञानिकहरूले mRNA खोपहरू विकास गर्न थाले - जुन के छैन फ्लस शट जस्तै परम्परागत खोपहरु विपरीत, भाइरस समावेश गर्दछ।
हामी COVID-19 खोपमा कसरी पुग्यौं: mRNA खोपहरू परम्परागत खोपहरू भन्दा बनाउनको लागि धेरै छिटो हुन्छ। जब महामारी फैलियो, वैज्ञानिकहरूले कोरोनाभाइरसको जीन संरचना प्रयोग गरे सहि mRNA अनुक्रम बनाउन। डा। किज्मेकिआ कार्बेट, काली महिला चिकित्सक र वैज्ञानिक, Moderna mRNA खोपको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। Moderna र फाइजर पहिलो दुई खोपहरु थिए FDA द्वारा अधिकृत।
सुरक्षा प्रोटोकोल र पर्याप्त परीक्षण: दुबै COVID-19 खोप विकास गर्ने एक हिस्सा थिए। COVID-19 खोपहरूका लागि विश्वव्यापी कोष, धेरै ठूलो, राम्रोसँग चलेको क्लिनिकल परीक्षणहरूको लागि अनुमति दिइयो जसले हामीलाई खोप सुरक्षित छ भनेर देखायो।
खोप प्रभावकारिता: Moderna र Pfizer खोपहरूले तपाइँलाई तपाइँको दोस्रो डोज वा बुस्टर डोज प्राप्त गरेको दुई हप्ता पछि तपाइँलाई COVID-19 बाट धेरै बिरामी हुनबाट जोगाउन काम गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, ती दुवैले तपाईंलाई गम्भीर अस्पताल भर्ना वा मृत्युबाट जोगाउन काम गर्छन्।
Johnson & Johnson's Janssen खोप
जोनसन र जॉनसन जानसेन भ्याक्सिन एक एडिनो भाइरस खोप हो।
एडेनोभायरस भ्याक्सिनको व्याख्या गरियो: एडेनोभायरस भाइरसको एक प्रकार हो जसले सामान्य चिसो पैदा गर्दछ, जुन अब सक्रिय भाइरस छैन। खोपले एक निष्क्रिय एडिनोवायरस को वाहकको रूपमा काम गर्नको लागि कोरोनाभाइरसबाट जीन हाम्रो शरीरमा पोषण दिन कोरोनाभाइरस प्रोटीन उत्पादन गर्दछ (भाइरस आफैं होइन)। प्रोटिनहरू तब भाइरस भएको बहाना गर्दछ तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भाइरससँग कसरी लड्ने भनेर बुझाउनको लागि, Moderna & Pfizer खोपहरू जस्तै।
खोप प्रभावकारिता: Janssen खोपले तपाइँलाई तपाइँको पहिलो वा बुस्टर डोज प्राप्त गरेको दुई हप्ता पछि तपाइँलाई COVID-19 बाट धेरै बिरामी हुनबाट जोगाउन काम गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, Moderna र Pfizer जस्तै, यसले तपाईंलाई गम्भीर अस्पताल भर्ना वा मृत्युबाट जोगाउन काम गर्छ।
खोप परीक्षणहरू: जानसेन भ्याक्सिन परीक्षणहरूमा अधिक विविध सहभागीहरू थिए जो हिस्पानिक/ल्याटिनो र कालो वा अफ्रिकी अमेरिकी भनेर चिनिन्छन्। यसमा ६० वर्षभन्दा माथिका र एकभन्दा बढी मेडिकल अवस्था भएका थप सहभागीहरू पनि समावेश थिए। परीक्षणहरू पनि स्थानहरूमा गरिएका थिए जहाँ केही नयाँ संस्करणहरू परिक्रमा भइरहेको थियो, र अझै पनि गम्भीर अस्पताल भर्ना र मृत्युलाई रोक्नको लागि काम गरिएको थियो!
COVID-19 खोप स्रोतहरू:
यहाँ खोप तथ्यहरू छन् खोप लिनु अघि पढ्नु:
Johnson & Johnson Janssen COVID-19 Vaccine Fact Sheet - अंग्रेजी
जॉनसन र जॉनसनको Janssen COVID-१ V भ्याक्सिन तथ्य पाना - स्पेनिश
Moderna COVID-19 भ्याक्सिन तथ्य पाना - अंग्रेजी
Moderna COVID-19 भ्याक्सिन तथ्य पाना - स्पेनिश
फाइजर-बायोटेक COVID-19 भ्याक्सिन तथ्य पाना - अंग्रेजी
फाइजर-बायोटेक COVID-19 भ्याक्सिन तथ्य पाना - स्पेनिश
V-Safe खोप स्वास्थ्य जाँचकर्ता पछि | CDC- V-Safe एक स्मार्टफोन-आधारित उपकरण हो जुन तपाईंमा जाँच गर्दछ पछि तपाईंको COVID-19 खोप। तपाईंको सहभागिताले COVID-19 खोपहरू सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ - तपाईं र सबैको लागि!